मानिस किन घुर्छ ? कसरी यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ ? | Ratopati
एकपटक म र मेरा साथीहरु हिँउ खेल्न भनी नगरकोट गएका थियौँ । अत्यधिक हिँउको कारणले त्यो दिन गाडी नै चलेन । घर फर्कन सम्भव नभएपछि हामी सबैजना त्यहीँ बस्ने निर्णय ग¥यौँ । होटलहरु पनि सबै भरिएकोले गर्दा ३–३ जना एकै कोठामा सुत्नु पर्ने भयो । ओहो, मेरो साथी प्रमेश त कस्तो घुर्दो रहेछ ! अझ त्यसमाथि पनि चिसोले गर्दा म र मेरो अर्को साथी श्रेयस्कर त सुत्नै सकेनौँ । भोलि पल्ट हामीले प्रमेशलाई ऊ घुर्ने गरेको बताउँदा त उसलाई यसबारे केही थाहा नै पो नभएको बतायो । त्यसपछि मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो– आखिर किन कोही मानिस घुर्छन् ? किन उनीहरु आफैंलाई चाहिँ यसबारे केही थाहा हुँदैन ?